Izindawo zaseLondon ongazazi | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Amadolobha, General, London
ILondon idolobha elifihla izinto eziningi ukuzibona nokuzenza. Ukuvakasha okukodwa akuvamisile ukufika ukuzobona konke esikufunayo, kepha uma kubhekwa ukuthi izindiza azibizi kakhulu, kuhlale kuyindlela yokubuyela. Uma usuzibonile izinto ezibalulekile, okungukuthi, iBig Ben, iBuckingham Palace nazo zonke lezo zindawo ezingaphuthelwa, manje usungakwazi ukwenza uhlu izindawo mhlawumbe obungazi ukuthi zikhona.
La idolobha laseLondon Kukhulu impela futhi kuyo kungenzeka ukuthi uthokozele izindawo eziningi ezingahle zingabonakali kuma-maelstrom wezivakashi. Sihlala njalo siya ezindaweni ezijwayelekile, kepha kwesinye isikhathi, ukuthola okuthile okukhethekile, kufanele sibheke lokho kuvakashelwa okungadumile kangako kepha okungaba mnandi ngendlela efanayo.
1 Imakethe yeSpitalfields
2 IWiston Churchill Bunker
3 Ukubukwa okuvela ePhalamende Hill
4 ISaint James Park
5 I-Mudchute Urban Farm
6 I-venice encane
7 IDunstan eseMpumalanga
I-Old Spitalfields Market ayiyona enye yezimakethe ezithandwa kakhulu, futhi ngokuqinisekile ayikwazi ukuncintisana ngokuthandwa naleyo esePortobello noma eCamden, kodwa futhi inokunikeza abavakashi okuningi. Iphakathi kukaBricklane neBishopsgate futhi iyi- imakethe yama-victorian ngobuhle obukhulu, ekubeni imakethe yezithelo enkulu kunazo zonke kulo lonke idolobha. Ivula zonke izinsuku zesonto futhi inesici sokuthi usuku ngalunye lunikezelwe ezintweni ezahlukahlukene, ngeSonto livulekele zonke izinhlobo zezitebele, okwenza kube usuku olumatasa kakhulu.
IWiston Churchill Bunker
Eduze no-10 Downing Street odumile kunendlu endala lapho uChurchill, izikhulu zikahulumeni kanye nabaphathi bezempi babalekela khona ukuze bathathe izinqumo phakathi neMpi Yezwe II. Ngaphandle kokungabaza, kungukuvakasha okuthokozisayo, ikakhulukazi kubathandi bomlando abafisa ukubona indawo ebaluleke kangaka ekuhambeni kwayo. Ungabona amaphaseji, amakamelo ngisho ne- Igumbi lokulala likaChurchill.
Ukubukwa okuvela ePhalamende Hill
Kuleli dolobha kuvame kakhulu ukujabulela isimo sezulu esihle lapho kuphuma ilanga nokuhlasela amapaki asezindaweni ezihlukene. Enye yalezo ezisinikeza ukubukwa okuhle kakhulu kwe-panoramic kwe- idolobha iPhalamende Hill, esenyakatho yedolobha, eHamsptead Heath. Kuyona singabona izindawo ezifana neCathedral of San Pablo buqamama ngenkathi siphumula noma sijabulela ipikinikini, yize kunjalo kumele siqiniseke ukuthi siya esimweni sezulu esihle ukuze sikwazi ukujabulela lezi zindawo ezivulekile.
ISaint James Park
Noma nini lapho sikhuluma ngamapaki aseLondon sikhumbula iHyde Park, kepha kukhona amathani amahektare aluhlaza kuleli dolobha, amanye awo angamapaki angempela, kanti iSaint James Park yiyona ipaki yasebukhosini endala kunazo zonke kusuka edolobheni. Izindaba ezimnandi ukuthi itholakala eduze neBuckingham Palace, okunye ukuvakasha okubaluleke kakhulu ukubona ukushintshwa konogada. Inechibi elineziqhingi ezimbili ezincane, kanye nezitendi ezincane zokuba nesidlwana ngenkathi silivakashela.
I-Mudchute Urban Farm
Kuleli dolobha kunezikhala eziningi eziluhlaza, kepha kuyamangaza ukuthi eduze kwesifunda sezezimali kanye namabhilidi akhona idolobha eCanary Wharf singathola izimvu, amahhashi nezinye izilwane zasemapulazini ezijabulela ukuthula okukhulu ngaphandle kokwazi ukuthi ziphakathi komuzi ophithizelayo. Leli pulazi linesikole sokugibela, ngakho-ke kungaba ukuvakashelwa okuthakazelisayo uma sihamba nezingane noma uma sithanda izilwane.
Nomaphi lapho kunesiteshi kuhlale kushiwo khona ukuthi sikhona esisodwa venice encane, naseLondon kuyafana. Kuleli dolobha imisele ayifani ncamashi naleyo yaseVenice, uma mhlawumbe ifana kakhulu naleyo yase-Amsterdam, kodwa iqiniso ukuthi linikezwe leli gama. Lapha ungajabulela izikebhe ezinhle, ezinye zazo okuyizindlu, nokuhamba ngokuzilibazisa okungaqala eRegent's Park kuphele emakethe yezinhlanzi yaseCamden. Kukhona nezindawo zokudlela ezinhle ezithokozisayo futhi kungenzeka ukuthi sithathe uhambo lwesikebhe uma sifuna ukubona umsele ngendlela ehlukile.
Leli kwakuyisonto elidala elashiswa ngumlilo wango-1666, laphinde lakhiwa nguSir Christopher Wren ukuba licishe libhujiswe ngokuphelele ngesikhathi kuqhuma amabhomu eWWII. Ngemuva kwale nhlekelele, ayiphindanga yakhiwa kabusha, kepha yashiywa njengoba kufanele ibe izingadi ezinhle. Namuhla yindawo enhle kakhulu, indawo lapho ungaphumula khona ungazi noma sisensimini noma sisesontweni. Ungawujabulela lowo muzwa wokuthi imvelo ihlala ihlasela yonke into ngokuhamba kwesikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izindawo eLondon okungenzeka ubungazazi